ရှက်လွန်းလို့ပါနော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ရှက်လွန်းလို့ပါနော်
Posted by Mr. MarGa on Nov 30, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Relationships & Family | 50 comments
အခုတလော ဦးမာဃ စိတ်နဲ့ လူနဲ့ကို မကပ်ဘူး
အလုပ်လုပ်ရတာလဲ အလွဲလွဲ အချော်ချော်နဲ့
ဗျာ ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ ဟုတ်လား
ဘာကိစ္စရှိဦးမှာလဲဗျာ လူ့ပြည်က ဦးမာဃရဲ့ ရင်နှစ်သည်းချာ သားရတနာပေါ့ဗျာ
ဖအေက နတ်ပြည်က ကိစ္စတွေနဲ့ မအားမလပ်ဖြစ်နေရတဲ့ကြားထဲ အဲဒီကောင်က လူ့ပြည်ကနေလှမ်းပြောတယ်။
စာမေးပွဲ ကျသတဲ့ဗျာ ။
ကြားကြားချင်း ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ဘူး။
ကိုယ်တွေးထားတာတွေ ပြန်စဉ်းစားမိပြီး ပထမဆုံး ဝင်လာတဲ့ အတွေးက ဒုက္ခရောက်ပြီ ဆိုတာပဲ။
ဦးမာဃက ငါ့သားလေး ဒီတစ်နှစ်ပြီးရင်တော့ ဘွဲ့ဝတ်စုံလေးနဲ့ မြင်ရချေသေး ဆိုပြီးတော့ နတ်ပြည်မှာ ပတ်ကြွားထားတာကိုးဗျ
ဦးမာဃရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ အစီအစဉ်တွေအားလုံး ရေထဲသဲသွန် ဖြစ်သွားပြီလေ။ သဲထဲရေသွန် တာကမှ အရာကျန်ဦးမယ်။
မိဘက လက်နဲ့ရေးတာကို ခြေနဲ့ဖျက်သွားသလိုပါပဲ။ အခုဆို ဦးမာဃမယ် နတ်သဘင်တောင် မှန်မှန် မတက်ရဲဘူး၊ နတ်တွေက တွေ့လိုက်တိုင်း သိကြားမင်းကြီးရဲ့ သားတော်မောင် အောင်ရဲ့လား ဆိုပြီးတော့ပဲ ဝိုင်းမေးနေကြတယ်။
ဦးမာဃမှာတော့ အဲဒီလို အမေးခံလိုက်ရတိုင်း ကိုယ့်သားကိုယ်ပဲ သတ်ချင်နေမိတယ်။
နတ်ပြည်မှာမို့ပေါ့ဗျာ လူ့ပြည်မှာဆို ဒီကောင် ဦးမာဃလက်ချက် မိပြီးပြီ။
အဲဒါကိုသိလို့ နတ်ပြည်က ဦးမာဃရဲ့ မိဖုရား လေးပါးကလဲ လူ့ပြည်ကို အဆင်းကို မခံဘူးဗျာ။ ဦးမာဃကို ဗီတိုအာဏာနဲ့ တားထားတယ်။
တစ်ယောက်ထဲ တားတာဆိုရင် ဦးမာဃ ပယ်ချလို့ရပါတယ်။ အခုက လေးယောက်အားဆိုတော့ ဦးမာဃလဲ ပယ်ချလို့မရဘူး။
အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်ဒေါသကိုပဲ ပြန်လျှော့နေရတယ်။
ဦးမာဃမယ် ဒီသတင်းကို ဘယ်သူ့မှ (အဲလေ) ဘယ်နတ်မှလဲ မပြောရဲဘူး။ ပြောလိုက်မိလို့ကတော့ဗျာ ဦးမာဃ နတ်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ သိက္ခာ ကျလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း။
နတ်စိတ်ဆိုတာလဲ လူ့စိတ်နဲ့ မထူးပါဘူးဗျာ ရင်ထဲက ကလိကလိနဲ့ ဖြစ်နေတာကို ဖွင့်မချရရင် နေလို့မကောင်းဘူးဗျ။
နတ်ပြည်မှာ ပြောမိရင်လဲ ကိုယ့်မျက်ခွက်ကိုယ် အိုးမည်းသုတ်သလို၊ ပက်လက်လှန်ပြီး တံတွေးထွေးသလို၊ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် လှန်ထောင်းသလို ဖြစ်မှာဆိုတော့ တော်တော် ထိန်းထားရတယ်ဗျ
အဲ နတ်ပြည်မှာ မပြောရဲလို့ လူ့ပြည်မှာ ရင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်လဲ သိကြားမင်းရဲ့ သားတော်မောင် စာမေးပွဲ ကျသဟဲ့ ဆိုပြီး ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်လိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်းဗျာ။
အဲဒါအပြင် သတင်းတွေ ရှားနေတဲ့ အချိန်မှာ ဒီသတင်းသာ ထွက်လို့ကတော့ အင်းးးးးးးးး လာလိုက်ကြမယ့် သတင်းထောက်တွေ တွေးမိတာနဲ့တင် ရင်မောပါ့ဗျာ။
တခြားအချိန်တွေတုန်းက ကျတယ်ဆိုရင် ဦးမာဃ ဒီလောက် ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။
ဒီနှစ်က နောက်ဆုံးနှစ်ဆိုတော့ ဦးမာဃလဲ ငါ့သားလေး ဘွဲ့ရတော့မယ်ဟဲ့ဆိုပြီး နည်းနည်း အကြွားလွန်သွားတာ။
တစ်ခါမှ စာမေးပွဲ ကျဖူးတဲ့ ကလေးမဟုတ်တော့လဲ မျှော်လင့်မိတာပေါ့ဗျာ။
သားတော်မောင်က ပြောရှာပါတယ် ခြေချော် လက်ချော် ဖြစ်သွားတာပါ တဲ့။
အဲဒီတော့လဲ သားတော်မောင်ကို စိတ်ဓာတ်မကျဖို့နဲ့ ဆက်ကြိုးစားဖို့ ပြောရတာပေါ့လေ။(စိတ်ထဲမတော့ ဘယ်ကောင်းမလဲဗျ မှန်တာပြောရင် သတ်ချင်နေတာ)
ဒါပေမယ့် အဲသလိုသာ ပြောလိုက်ရင် ပိုဆိုးမှာဆိုတော့ စိတ်ထိန်းထားရတာပေါ့ဗျာ။
သူ့ခမျာလဲ ဘယ် စိတ်ကောင်းရှာမလဲလေ။ ဦးမာဃတောင် ဒီလောက် ဖြစ်နေတာဆိုတော့။
ဦးမာဃလဲ ဘယ်အချိန် ရောဂါရမလဲ မသိဘူး။ ခင်ဗျားတို့လဲ သိပါတယ် ရင်ထဲမှာ မြုံထားရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာလေ။
အင်းးးးး အနည်းဆုံး တစ်လ၊ တစ်လ ကျော်ကျော်လောက် တော့ မြုံထားရဦးမှာပေါ့ဗျာ။
မြုံမထားလို့ ပြောဟေ့ဆိုတော့လဲ ရှက်လွန်းလို့ ပြောမထွက်ဘူးဗျ
ဦးမာဃ ရှက်လွန်းလို့ ဒါကို ဘယ်သူ့မှ မပြောရဲပါဘူးဗျာ။
အခုလဲ ဦးမာဃ ပြောသာပြောလိုက်ရတယ် ရှက်လိုက်တာနော်။
တကယ်ပြောတာပါ ဦးမာဃ ဘယ်သူ့မှ မပြောပါဘူး ရွာထဲသာ မနေနိုင်လွန်းလို့ ပြောပြတာ။
ခင်ဗျားတို့ ဘယ်သူ့မှ မပြောကြနဲ့နော်။
ဟုတ်ကဲ့ ဘယ်သူ့မှ ပြန်မပြောပါဘူး ဦးမာဃ စိတ်ချလက်ချနေပါ ရွာထဲက
member သိပ်မများပါဘူး ၉၀၀၀ ကျော်ဆိုလား အဓိက ဖွဘုတ် အဲလေ
ဖေ့စ်ဘုတ် ပေါ်မရောက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာ ဖွဘုတ်ပေါ် ရောက်လို့ကတော့
ရွာထဲသာ မနေနိုင်လွန်းလို့ ပြောပြတာ ဆိုတော့လေ
ဘယ်သူ့မှ မပြောလို့ မအိကို ကျေးကျေးပါလို့
ဒါပေမဲ့ ဆုံးမတဲ့အခါ ဒေါသ မပါအောင်
ကျုပ်မလဲ သားတစ်ကောင်ကို သတိထားပီး မနဲတဲ့မတ်ပေးနေရပါဂျောင်းးးး :528:
ထိုင်နေလို့တော့ ဘာမှ ဖြစ်မလာဘူးဆိုတော့လဲလေ
သိကြားမင်း သိက္ခာက ရှိသေးတယ်
ကျောင်းသားဘွက ဘန့်ခ်ျပေါ်မှာ ကော်ရက်ရှင်ပင်န် နဲ့ ရေးထားတဲ့ ကဗျာတိုလေးအမှတ်ရတယ်..
ငါက … ငါက … ဆပ္ပလီ
ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းတော့ မြင်ရဆိုးပေမယ့် သူများထောင်းတာထက်တော့ သက်သာသေးသပေါ့ဗျာ..
အဲဒါကြောင့် ရွာထဲကို ဖွင့်ချတာပေါ့ကွယ်
ဆိုးတာက ကွန်ပျူတာမှာ ဆပ်ပလီမရှိဘူးကွယ့်
နောက်တက်လာတဲ့ ပထမနှစ် စော်အလန်းလေးတွေ ထပ်ရှာလို့ရမှာပေါ့ သူ့ခင်မျာ
နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသားကြီးပဲဟာကို နော
သိကြားမင်းကြီး ကတန်ခိုးနဲ့ဆွဲတင်ပေးလိုက်ပါ့လား ဒီနေရာကြတော့ တန်ခိုးမရှိဘူးပေါ့လေ ဟိဟိ
အင်းးးးးးးးးငါတော့ ဗုံဗုံ နဲ့မှပဲ သိကြားသိက္ခာ ကျတော့တယ်
ဗုံဗုံ ရယ် တန်ခိုးနဲ့ လုပ်ရင်တော့ ရတာပေါ့ကွယ်
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အင်အားနဲ့ ကြိုးစားတာက ပိုတန်ဖိုးရှိတယ်လေ
အဲဒါကြောင့် ဦးမာဃက ဘာမှ ဝင်မပါတာ
အော် .. အင်း .. အဲ ..
ဘယ်မှာမှ မဖွပါဘူး ..
ဗြဟ္မာပြည်ကိုတော့ဖြင့် ခြွင်းချက်အနေနဲ့ ခွင့်ပြုပါလို့ ..
ခွင့်မပြုလည်း ဖွဒယ်ဂျာ .. ဘာဖစ်လဲလို့ ..
အမလေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး သရဲ သရဲ
မနေ့က သေသည် ..
ဂနေ့ ပြန်ရှင်သည် ..
ကျွန်ုပ်ကား ဝိတ်ဆဒို ဘေထီးးးးး ..
ဒါမှန်းသိ နတ်ပြည်ကနေ မစောင့်ပါဘူး
စိတ်ချ ဘူမှပြောဘူး လူစုံအောင်စောင့်မယ် :harr:
စာအုပ်တွေက အိပ်ချင်စရာ ထူထူထဲထဲတွေ ဆိုတော့လေ
အတွေ့အကြုံစုံသွားတာပေါ့l: lol: ကျတဲ့ဘ၀ကိုမသာယာပဲသင်ခန်းစာယူတတ်ဖို့ပဲလမ်းညွှန်လိုက်ပါဗျာ..။
မရှက်ပါနဲ့ဗျ ဒါလောကဓံ ပဲလေ ဟုတ်တယ်ဟုတ်..။
အတွေ့အကြုံ စုံတယ်လို့ပဲ မှတ်ယူလိုက်ပါတယ် မရွှေကြည်ရေ
ဆက်ရွန်းပါပြီ လေးပေ ခင်ဗျား
ကျပြီးမှတော့ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ ဖိုးသီကြား ရယ်။
ကျက်ထားတာ နဲ့ မေးတာနဲ့ မကိုက်သွားလို့ ကျတာ ဘာရှက်စရာရှိလဲ။
အတိတ်က ကျန်ခဲ့ပါပြီ။ ဘာမှ လုပ်လို့ မရပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဖြစ်ခဲ့တာကို သင်ခန်းစာယူပြီး ပိုပြီးကြိုးစားအောင်သာ အားပေးပါ။
လက်ရှိ က ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။
ဒူ့ကိုမှ..မပြောပါဗူး..။
ဒူ့ ကိုမှ မပြောလို့ အလက်ဆင်းကို မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ်နော်
လာဖတ်တာ ကျေးကျေးပါ လို့
မောင်နှမ နှစ်ယောက်ပဲရှိတာ (၃)နှစ်ရှိပေါ့ (၁၀)တန်းကျတာ..
ဦးမာဃထက်ရှက်သဗျာ။ကျုပ်တုန်းက ၅ ဘာသာမှာ ၃ ဘာသာဂုဏ်ထူးပါသဗျ…
ကျန်တဲ့ဘာသာတွေကလဲ ၇၀ ကျော်သဗျ။အခုတော့ ညီမက (၁၀) တန်းတောင်အောင်အောင်မဖြေနှိုင်
အင်းးးးးးးးးးးးး ဦးမာဃ ကပဲ မောင်မိုးတိမ်ကို ပြန်အားပေးလိုက်ပါမယ်
ကိုယ်က လမ်းဖောက်ခဲ့ပေမယ့် မွေးချင်းတွေက ကိုယ်ဖောက်တဲ့လမ်းကို မလျှောက်နိုင်ရင်လဲ ဂရုဏာဒေါသော ဖြစ်တတ်ပါတယ်
သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ဉာဏ်ရည် မတူဘူး လို့သာ မှတ်ရမှာပေါ့လေ
ပိုစ့်ပိုင်ရှင် ဦးမာဃ ရေ .. ဒီနှစ် က ကွန်ပျုတာ မှာ အကျ (အလွန်) များပါတယ် ….။ နောက် နှစ်မှာ ပညာသင်နှစ် လေးနှစ် နဲ့ ညှိသွားမှာ မို့ ……… စိတ်မကောင်းပါဘူး လို့ပဲပြောချင်ပါတော့တယ် .. ကျုပ ညီတော်မောင် လဲ ဒုတိယ နှစ် မှာ ကျ ပါတယ်။ ဒုတိယ နှစ် ကျောင်းသားသူ တွေ ထဲက 60 % လောက်ပဲ အောင်တယ် ကြားပါတယ် ….။ တက္ကသိုလ် ရဲ့ အထူးသင်ခန်းစာ အဖြစ် သင်ယူ နိုင်ပါစေ လို့ အားပေးပါရစေ …. ဗျို့  …။
မှန်ပါတယ် ကို Mလုလင် ရေ
ဦးမာဃ သိတာကိုပဲ ပြောရမယ်ဆိုရင် UCSM က တတိယနှစ် ဖြေတဲ့သူ ၈၃ ယောက်မှာ ၅၀ ခန့်သာ အောင်ပါတယ်။
အဲဒီ အထဲကမှ ၉ ယောက်သာ ဂုဏ်ထူးတန်း ပါပါတယ်။
အဲဒီတော့ အောင်ရုံသာ အောင်တဲ့သူတွေကလဲ ဂုဏ်ထူးတန်းမပါလို့ စိတ်ညစ်( သူတို့က ခါးပြတ်သွားတာဆိုတော့လေ)
ကျတဲ့သူတွေကလဲ ကျလို့ စိတ်ညစ်
အဲ ဂုဏ်ထူးတန်း ပါတဲ့သူတွေကလဲ ကိုးယောက်ထဲဆိုတော့ တက်သင့်မတက်သင့် တွေဝေကြတာနဲ့
ဖွဘုတ်က ကျောင်းသားအသိုင်းအဝိုင်း မှာလဲ မကျေနပ်သံတွေ ပလူပျံနေတာပါပဲ
9 ယောက်ဆို တက်သင့် ပါတယ် . ကျုပ် တောင် အောက်ပိုင်း တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ် စုစုပေါင်း 11 ယောက်ထဲ အောင်တုန်းက တက်ခဲ့သေး …. ပျော်စရာတော့ ကောင်းသား … Roll Call မပြည့်မှာ လဲ မပူရဘူး …. ယောင်္ကျားလေး ၃ ယောက် ထဲဆိုတော့ အထူးအခွင့်အရေး ရတာဗျို့  …………။ ငယ်တုန်းရွယ်တုန်း တက်သင့်ပါကြောင်း …………………….။
ဒါပေမယ့် အဲဒီထဲမှာ ဦးမာဃ မပါဘူးလေ
မိန်းကလေး ကိုးယောက်သာ ရွေးချယ်သွားတာကြောင့်
အဲဒီထဲသာ ဦးမာဃ ပါရင်တော့လား အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ကဲ ဒါဆိုလဲ ရန်ကုန် လာခဲ့ဗျာ .. ကျုပ်နဲ့ တူတူ ကုန်လာထမ်း ချေ …. တွက်ခြေကိုက် တယ်ဗျိုးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ကိုယ့်ဟာကိုယ် နတ်ပြည်မှာပဲတစ်ဖက် ငါးရာနဲ့ နှပ်တော့မယ်
မင်းတို့ လူ့ပြည်တွေ နတ်ပြည်တွေမှာ အဲ့ဂလိုတွေ ဖြစ်နေကြတာ
ကျုပ်လို နတ်တို့သနှင်း သကြားမင်း ကကြည့်ရတာ မျက်စိနှောက်လှ
ကြားရတာ နားရှုပ်လှတယ်ကွယ် ……
သကြား ဆီးဆိန် လေးအပြည့်အ ခံစားပြီး အေးအေးဆေးဆေး နေချင်လှသကွယ့်
ကို Mobile (အင်းးးးးးးးးးးး အခုတော့ သခင် Mobile ပေါ့လေ)
အဲဒါကမှ ဦးမာဃ နေချင်တဲ့ ပုံစံပါကွယ်
ဒါပေမယ့် အခုတော့ ဟင့် :buu:
ဦးမာဃ က ရှက်သာရှက်တာ
ဘူ့မှ မှ မပြောတာ
ရှက်စရာ မလိုဘူးထင်ပါ့ နော
ဒီခေတ်ကြီးမျာ တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲကျတာ ရှက်စရာမဟုတ်…။ သေချာစဉ်းစားပါ.. အယင်ခေတ်က စာမေးပွဲအောင်ဘွဲ့ရရင် ဘာလို့ဂုဏ်ယူဂျလဲ… လူနည်းနည်းလေးပဲ အောင်လို့… ဒီခေတ် ပညာရေးစနစ်မှာ လူတိုင်းဘွဲ့ရ စာမေးပွဲအောင်နေတာ ဦးမာဃသားက အနည်းစု စာမေးပွဲကျသူထဲပါလို့ ဘယ်လောက် ဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းသလဲ…။ အများထဲကတယောက်ဖြစ်မှ ထွန်းပေါက်တော့မပေါ့…။ မောတယ် ဒီလို ကွန်ဆာဗေးတစ် ရှေးယိုးစွဲတွေနဲ့ ပြောရတာ….
အင်းးးးးးးးးးးးးးးး ဦးကြောင် ပြောသလို တွေးတော့လဲ ဟုတ်သားနော်
ဦးကြောင် အကြံအတိုင်း အများထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် လုပ်ပါတော့မည် ဆိုတဲ့အကြောင်းပါဗျာ
အော့အော် မပြောချင်ရှာလို့ပေါ့နော်။ တနားတာအေ။
ဒါနဲ့ ဒီပို့စ်က အခုမှ ဘာလို့ ပြန်ပေါ်လာတာလဲဟင်
အဲဒီအကောင် မွှေသမျှသာ ပြောရရင် ကုန်နိုင်ဖွယ် မရှိဘူး….
ကလေး သားလေး မျက်နှာ ဘယ်မှာ သွားထားမလဲ…။
ပညာသင်စားရိတ်ထောင်းတာက တော့ ထောင်းတာပေါ့..
ခုလို ထပ်ပြီး ခဏခဏရှက်မနေပါနဲ့ တော့…။ လူသိကုန်လိမ့် မယ်.. ခု သိပ်မသိကြသေးဘူး… ခွိခွိ
အဲဒါကြောင့် မပြောဘဲ နေတာပေါ့ဗျာ
ဒီကလေး မျက်နှာ ရှိနေလို့ ဗျ
မဟုတ်ရင် မလွယ်ဘူး တကယ်…